UThixo Complex - Khetha Uphawu
Ilanga kwaye ISaturn dlala ezi ndima zibaluleke kakhulu kubomi bethu kwaye umfuziselo wazo unokubonwa ngokuzicingela, umthwalo woxanduva, izimo zengqondo ezingqongqo ngakuSiqu (kunye nabanye), isigwebo, okanye imida esempilweni kunye nokuqonda ukuba sonke singabantu. Inkcaso yokuqala kaLeo kunye no-Aquarius ilele apha kwaye iqwalasela ukubaluleka kwayo kubo bonke ubudlelwane bethu kunye nehlabathi lomntu ngamnye, akumangalisi ukuba uphawu Aquarius imele zombini amakhamandela ethu (ngokwesiko elawulwa nguSaturn) kunye nenkululeko yethu kunye nokukhula kwengqondo (ulawulo lwe Uranus ).
Zombini ezi planethi zimele ubawo wethu kwitshathi kwaye ukongamela nokuba kuxhomekeke kwixesha lokuzalwa. Ukuba iLanga lifunyenwe ngaphezu komgca wokunyuka kwethu, ligunya elilawulayo, kwaye ukuzalwa ebusuku (kunye neLanga ngaphantsi kwe-horizon) kugxininisa kakhulu kwiSaturn. Ngakolunye uhlangothi, zombini ezi mibutho zimela uxhulumaniso lwethu noThixo kunye neNdawo yonke, iSaturn imele ukukwazi kwethu ukwamkela iimeko njengoko ziza nesabelo sethu esifanelekileyo soxanduva, kunye neLanga limele ukukwazi ukuSelf ukunqoba imingeni ngokwemeko.
Oko sikunikwa lulwalamano lwethu nobawo kubonakala kungaphezu kokuba sisoloko sikubona, kuba ungoyena ubalulekileyo kuthi, igunya, noThixo esimele sijonge kuye. Ubudlelwane ngokwawo bucela umngeni kwi-Ego (kuphawu lobudoda lwe Iponti apho iLanga liwela khona) kodwa lakha ihlabathi lethu lemida (iphakamisa iSaturn). Ngokuchaseneyo noko, ukukwazi kukabawo ukuzimela ngeenyawo aze alawule ubomi bakhe kubonakala Aries (ukuphakama kweLanga) okanye ukungakwazi kwakhe ukunqoba iimeko kunye nokusombulula iingxaki (ukuwa kweSaturn). Xa siqwalasela ishati yethu yokuzalwa kule migaqo, sinokufumana ingcambu yokholo lwethu, okanye ukungabikho kwayo, kule miqondiso mibini ye-zodiac kunye nesikhundla seLanga kunye neSaturn kunye nayo yonke imingeni yabo, izidima, inkxaso kunye neenkumbulo.
Umsebenzi ophambili wokwazisa kunye nokukhangela kwethu ukukhanya kuwela kwindawo yolawulo lwabo, kuba ezi mpawu zibonisa umgca wokuqonda kwethu iNdalo kunye nombono esikwazile ukuwuphuhlisa. Siya kunika intlonipho kunye nokucaca okuphuma ngeLanga, kodwa siwe ukuze sibone izithunzi, ubumnyama kunye nomda apho iSaturn ingasivumeli ukuba silawule. Ngethamsanqa, akukho ngxaki yangaphakathi engenakoyiswa, kwaye akukho meko yangaphandle engenakwamkelwa, xa sizinzile kwindawo yamandla omntu kwaye sigxile ekukhanyeni kwethu ukuqonda.
Ngelixa abantu betyekele ekugwebeni abo baneengxaki ezinzulu zokuzicingela, sihlala sisilela ukubona ukuba umgwebo ngokwawo umele ubudlelwane bethu nalo mbandela. Umgwebo yindawo yoqhagamshelwano, apho iimvakalelo zingenayo kwaye siwela ngokwethu. Kukungakwazi kwethu ukuzixolela ngokwethu ngeempazamo esizenzayo (okanye esicinga ukuba siyazenza). Ingxaki ye-Ego yinto enye sonke esabelana ngayo de sikhanyiselwe ngokupheleleyo. Ngeentlungu ezaneleyo eziziswe kuthi ngexesha lobuntwana, sonke siya kuba yi-ego maniacs kwaye akukho buntwaneni ngaphandle kwentlungu ekunyukeni okuhlangeneyo kwengqondo. Nangona inkqubela-phambili ivumele ukukhanya okungakumbi kumagumbi ethu okufundela kwaye abantu abaninzi namhlanje banelungelo lokuvota, sisanika ingqwalasela enkulu ekukhulisweni kwabantwana ukuba bathobele kwaye baziphathe ngeendlela ezithile ukuze bangene kwimbumba. Umntu ngamnye ubonakala enzakele ngalo lonke ixesha sixelela umntwana wethu ukuba angabaleka eze esidlangalaleni okanye alahle ipleyiti yeceramic. Ngakolunye uhlangothi, luxanduva lwethu ukufundisa abantwana bethu ukuba babe yinxalenye yeqela langoku kwaye bahlale bekhaliphile, banxibe njani kwaye babe ngubani, indlela yokubonisa ihlabathi labo langaphakathi kodwa bangaziva benqatshelwe. Ulwakhiwo luyafuneka ukukhula, kunye nemiceli mngeni yokuphuhlisa ubukroti, kunye nomntu ngamnye ukwaphula imida nokwenza inkqubela.
Oku kubonakala kuyinkqubo entsonkothileyo esingakwaziyo ukuyiqonda okwangoku. Sekunjalo, sinokukhumbula ukuba abo baneengxaki ezinkulu zokuzingca baye baphantsi kweentlungu ezininzi, yaye abo babandezeleka ngenxa yobunzima bukaThixo nabo bathwala uxanduva lukaThixo njengoko besenza izigqibo egameni lethu.
Abanye abantu baya kufihla izinto, bakholelwe kumlingo we-Self, bekhutshiwe kwinyani, becinga ukuba banolawulo oluthile olungenalwazi olubangela iimeko ezibuhlungu kunye nobumnyama. Ngokuqhelekileyo, baya kukholelwa ukuba ukuxhathisa ubumnyama kubenza bazenzekele, njengoko bezinqumla emfanekisweni obangela uloyiko lwabo. Baya kubaleka bazifihle kwintlungu yabo. Abanye baya kuziva njengabavangeli basemazweni abancedisa aba bantu bangekho ngqiqweni ukuba bafumane isiseko sabo njengoko bethembele kuBuqu, kungekho mntu wumbi abanokuthembela kuye. Bahlala kumgibe wokuchazwa yintlungu. Uhlobo lwesibini luya kuzama ukunceda uhlobo lokuqala luthathe uxanduva lweSelf. Uhlobo lokuqala luya kuzama ukunceda uhlobo lwesibini luphuhlise ukuguquguquka kunye nokwamkelwa kweemeko abangenako ukuzilawula. Ngokuqhelekileyo, akukho mntu uya kubona ukuba babelana ngengxaki efanayo kwisiseko sayo - isizungu kunye nokungabikho koqhagamshelwano lweemvakalelo kunye nomfanekiso kayise. Iingxaki zethu zisidibanisa kunxibelelwano olusondeleyo, silangazelela ukusonjululwa, kwaye uthumo lokusibiza ukuba sincede omnye ngumnqweno ongaphakathi wokuzinceda.
Mhlawumbi lixesha lokuba sonke sibone ukuba lukhulu kangakanani lo mfuziselo uphela. Sonke sabelana ngayo kwinqanaba elithile. Ngelixa omnye wethu eza kunceda kwaye axhase, omnye uya kusilela ukuthwala uxanduva. Emva koko, siya kutshintshana, sitshintshe iindima, kunye noxanduva luya kuthathwa kuzo zonke izinto ezingalunganga, okubangela ukuba sigqibe ukugxeka (ukubonakaliswa okuphantsi kweSaturn) endaweni yokuma ngokuqinileyo kumgca wemida ephilileyo kubudlelwane obunothando, eneneni ukuxhasa ukukhula ngokunika omnye komnye uthando lwe-naïve phezu komda kunye nengxaki nganye. Ngaba le asiyiyo imvakalelo yokungazithembi eyona mfuno yokwenene yobuntu bethu?
Inkululeko yokwenene iza xa siyeka uxanduva olungelulo olwethu kunye noloyiko olusibopha ngeziphumo ezinokuvela. Siyakhulula njengoko sithatha uxanduva phezu kolonwabo lwethu kwaye sinikezela kubizo lwentliziyo yethu. Sinomphefumlo wethu wokuphilisa, ezethu iintliziyo zokumamela, kunye nezenzo zokwenyani kunye nezenzo ezithatyathelwe abanye ukuba babe noxanduva. Ukunxibelelana phakathi kwemiphefumlo kuyasiphilisa sonke, yiyo loo nto sonke sibizelwe kubomi babanye ngamaxesha anzima. Sisigqibo sethu sokwamkela isimemo kwaye sinike uthando komnye umntu nangawuphi na umzuzu. Ikwasisigqibo sethu ukuba iimfuno zethu zihlangatyezwane nembuyekezo kwaye sizikhwebule kubudlelwane obungazizalisekisiyo. Kukho inqaku lenyaniso yobuqu apho sikhoyo, enyanisweni, abo balawula ukhetho lwethu ebomini, kuba ewe - kukho iNdalo, iNdalo, uThixo, inkqubo yobuntu esiyiyo, inkulu kakhulu kuneyethu. amagunya abantu ayenokubakho. Kwaye kukho indawo yokuxolelwa apho ngokwenene siqonda ukuba amagunya ethu ahlala engumntu kuphela, ebotshiwe kwaye evunyelwe ukwenza iimpazamo, njengokuba sinjalo.
Isagittarius Virgo Gemini Khetha Uphawu Emanzini